चंद्र क्यालेन्डर 2018 | नेटवर्क मौसम विज्ञान
चंद्र क्यालेन्डर २०१।
हामीलाई थाहा छ, हाम्रो चन्द्रमामा २ 28 दिनको चक्र रहेको छ। यी दिनहरू बित्दै जाँदा यस स्याटेलाइट चार चरणहरू हुँदै जान्छ। प्रख्यात चरणहरू हुन्: नयाँ, बढ्दो, पूर्ण र हराउँदै। आज हामी तपाईंलाई यो देखाउन जाँदै छौं २०१ l चन्द्र पात्रो सबै ग्रहणहरू, संकेतहरू र केही ज्योतिषीय व्याख्याको साथ। हामी भित्र छौं मे महिनाको क्यालेन्डर वर्णन गर्न सुरु गर्नेछौं र हामी डिसेम्बरमा जानेछौं।
के तपाइँ चन्द्रमाको सबै चरणहरूको मिति र यसको अर्थ जान्न चाहानुहुन्छ? पढिरहनुहोस् 🙂
1 मेमा चन्द्रमा
2 जुनमा चन्द्रमा
3 जुलाई मा चन्द्रमा
4 अगस्तमा चन्द्रमा
5 सेप्टेम्बरमा चन्द्रमा
6 अक्टुबरमा चन्द्रमा
7 नोभेम्बरमा मून
8 डिसेम्बरमा चन्द्रमा
मेको यो महिनामा हामीसँग थियो मे7मा अन्तिम क्वाटरमा चन्द्रमा र मे १ on मा नयाँ चन्द्रमा। यस महिनाको लागि, चन्द्रले हामीलाई केही अन्य घर जग्गा सम्पत्ति, आर्थिक, परिवार वा निर्माण परियोजना गर्न पर्याप्त ऊर्जा ल्याउँछ। व्यायाम गर्न सुरु गर्नु यी मितिहरूमा एक राम्रो विकल्प हो र त्यसैले हामी धेरै तनावको सामना गर्दैनौं।
पहिलो क्वार्टर मे २२ मा देखा पर्नेछ, र अन्तमा, मे २ on मा पूर्णिमा। चिन्ह धनु राशि छ र हामीलाई महिनाको अन्त्यमा खुशी र उत्साह देखाउँदछ। निस्सन्देह र शुद्ध विश्वास हाम्रो साथमा हुने तत्वहरू हुन्। जब हामी दिनभरि हर इशारामा उदार हुन्छौं, हामी प्रशस्तताको छातीको साँचो पाउँछौं। पूर्णिमा को दिन एक खेल गतिविधि योजना को लागी एक राम्रो विकल्प हो।
जुनमा, उच्च तापक्रम र ग्रीष्म संक्रान्तिको सुरूवात अधिक र अधिक आउँछ। हामीसँगeछजून on मा अन्तिम क्वाटर र जून १5मा नयाँ चन्द्रमा। चिन्ह मिथुन हो। सञ्चारमा प्रयोग गरिएका रणनीतिहरूले हामीलाई अन्य व्यक्तिहरू माझ पुग्न र आफू जस्तो गरी आफैलाई देखाउन मद्दत गर्दछ। हामीले अवस्थित परिस्थितिहरूको अवलोकन गर्नुपर्दछ र हामी भाषा सिक्न वा नयाँ अध्ययन सुरु गर्न सक्दछौं। यो चन्द्रमा हास्यका साथ चीज लिन तयार छ।
अर्कोतर्फ, हामीसँग हुनेछ जुन २० मा पहिलो क्वाटर र जून २ 20 मा पूर्णिमा। चिन्ह मकर हो। यी मितिहरूमा चन्द्रमा अधिक रचनात्मक, श्रमशील, केंद्रित र बलिदान भएको छ। सबै समस्याहरू तपाइँसँग डिल गर्न र त्यसलाई हल गर्ने सबै उर्जा कम हुँदैछ। काम आधा गर्न नछोड्नुहोस्। तपाईंको भावनात्मक संसार केही बढी रोकिनेछ।
जुलाई मा चन्द्रमा
गर्मी को बीचमा, धेरैको लागि छुट्टीको एक महिना, हामीसँग अन्तिम क्वार्टर हुनेछ जुलाई on मा र १२ औंमा नयाँ चन्द्रमा। हामीसँग क्यान्सरको चिन्हमा सूर्यको आंशिक ग्रहण हुनेछ। यी दिनहरू केहि को लागी धेरै गहन हुन सक्छ। आफैंलाई जान्नु र हामी को हौं र हामी के खोज्दैछौं भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो प्राथमिक वातावरणले हामीलाई आफूलाई चिनाउन र चीजहरू जुन हामीले सोचेका थियौं त्यो हाम्रो होइन हाम्रो लागि बनाउन सक्छ। आफुसँग इमान्दार हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामीमा नभएको सबै कुराले हाम्रो जीवनको चरण बन्द गर्दछ।
El हामी जुलाई १ on को पहिलो क्वार्टर र जुलाई २ 19 मा पूर्णिमा हुनेछौंकुंभ राशिको कुल चंद्रग्रहणको साथ। यी दिनहरु पनि अधिक तीव्र हुनेछ। आधारभूत प्रश्नहरूले हामीलाई स्वतन्त्रताको त्यो सीमा पार गर्न अगुवाई गर्नुपर्दछ। हामी आफैंलाई विभिन्न चासो, अझ खुला स्नेह र अधिक सजिलोताको भावना संग फेला पार्न सक्छौं। हामी शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा सामान्य भन्दा बढी विच्छेदन गर्न सक्छौं। यो तातो, छुट्टी, र शान्त वातावरणमा सामान्य छ।
El अन्तिम क्वार्टर अगस्ट २ मा हुनेछ र चन्द्रमा ११ मा वर्षा हुनेछ अगस्त सूर्यको आंशिक ग्रहणको साथ। चिन्ह लियो हो। यी दिनहरूमा हामी मामिलाहरूमा साहस र व्यक्तित्व लागू नगरी केहि पनि प्राप्त गर्दैनौं। हाम्रो वातावरणमा उनीहरूले हामीलाई जे भन्छन् त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्दैनन्।
El वैक्सिंग क्वार्टर अगस्ट १ and र पूर्णिमा २ 17 मा आउनेछ मीनको चिन्हमा। यस समयमा, कल्पना, सपना र अन्तर्ज्ञान हामीलाई प्रत्येक दिन जारी राख्न मद्दत गर्दछ। साथै ज्यादती र लागूपदार्थले तपाईंलाई जबरजस्ती विच्छेदन प्रदान गर्न सक्दछ। तिनीहरूबाट अलग रहनुहोस्। यी तातो दिनमा हामी अरूलाई धोका दिन वा हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यद्यपि हामी यदि त्यस्तो मान्छेहरूसँग सम्पर्क बनाउँछौं जसले हामीलाई हेरफेर गरेका छन् वा धोकामा पारेका छन् भने हामी यसबाट बच्न सक्छौं। यी दिनहरूको फाइदा लिनुहोस् किनभने ऊ अरूसँग बढी समानुभूतिशील र रचनात्मक हुनेछ।
यस महिनामा ठाउँ लिनेछ १ को अन्तिम क्वाटर र moon औं महिनामा नयाँ चन्द्रमा कन्याको चिन्हमा। सेप्टेम्बर दिनचर्या, तनाव, छुट्टी पछाडि आघात इत्यादि संगै हो। यो बानी साना समायोजन गरेर तय गर्न सकिन्छ। जब हामी सानोमा अर्डर गर्दछौं, हामी ठूलोमा शान्त हुन सक्छौं। एक मानसिक कवच मा हुन को लागी धेरै छ।
El पहिलो क्वाटर १ the औं र पूर्ण चन्द्रमा २ on मा हुनेछ मेषको चिन्हमा। मौसम कार्य, पहल र व्यक्तिवाद हो। यी दिनहरू हामी सार्नुपर्नेछ र चीजहरू सुरू गर्न यो उत्तम हुनेछ। त्यहाँ हिंसाको एक निश्चित मौसम हुन सक्छ। तिनीहरूलाई हटाउन, यो खेलको अभ्यास बाहिर राम्रो छ।
अक्टूबर मा तापमान ड्रप गर्न थाल्छ र हामी शरद greetतु लाई अभिवादन गर्दछौं। ढल्दै आएको चन्द्रमा आउनेछ अक्टुबर २ मा र यसलाई fill मा भर्नुहोस् तुला राशिको चिन्हमा। हामीसँग प्रेम सम्बन्ध वा एक प्रलोभन हुन सक्छ। तपाईंको दिनचर्या रमाइलो कार्यहरूले भरिन्छ।
El पहिलो क्वाटर अक्टुबर १ 15 र पूर्ण चन्द्र अक्टुबर २ will मा हुनेछ। साइन वृषभ। चन्द्रमा जुन हामीसँग यी दिनहरू धेरै आनन्द र कामुकता हुनेछ। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू प्रासंगिक हुन्छन्, दुबै खाना, आराम र वित्तीय आवश्यकताहरूको सन्दर्भमा। हामी के गर्न चाहन्छौं जुन हामी चाहन्छौं र पागल चीजहरू छन्।
अन्तिम क्वार्टर अक्टुबर place० मा हुनेछ।
नयाँ चन्द्रमा प्रवेश गर्दछ November नोभेम्बर महिना वृश्चिकको चिन्हमा। बाटोमा गहनता हुनेछ र हाम्रो डर बढ्नेछ। यो पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि कुन घनी भावनाहरू हुन्।
El पहिलो क्वाटर १ the औं र पूर्ण चन्द्रमा २ on मा हुनेछ चिन्ह मिथुन। यस चन्द्रमाको साथ सबै समयमा मौन बसिएको सबै कुरा। पतिहरु, प्रेमीहरु, मित्रहरु, आदि संग हामी संग debtsण छ। तिनीहरू व्यवस्थित हुनुपर्दछ।
अन्तिम क्वार्टर २ th हो।
हामी एक साथ वर्ष बन्द गर्छौं डिसेम्बर on मा नयाँ चन्द्रमा धनु राशिको हस्ताक्षर मा। यो त्यस्तो समय हो जब हामी जोखिम लिन सक्दछौं किनभने हामीमा विश्वास र शक्ति हुन्छ। हामी युद्धहरू जित्न सक्छौं।
El पहिलो क्वाटर १ the औं र पूर्ण चन्द्रमा २ on मा हुनेछ साइन कर्कमा। पानीको चन्द्रमा हुनुको मुड परिवर्तन हुनेछ। हामी चोट, संवेदनशील महसुस गर्नेछौं र हामीसँग सम्पर्क र स्नेहको प्रदर्शनको लागि अधिक क्षमता हुनेछ। तपाईंले अन्तर्ज्ञानको स्तर बढाउनु पर्छ।
यस जानकारीको साथ तपाईं २०१ 2018 भर चन्द्रमाका सबै चरणहरूमा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » चंद्र क्यालेन्डर २०१।
अल्फ्रेड वेजनर को थिए?
बायोमास, यस नवीकरणीय ऊर्जाको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा